प्राकृतिक कपाल: कर्ल परिभाषित गर्नुहोस्, केन्की कपाल घुमाउने 2020 कसरी गर्ने
1 प्राकृतिक कपाल घुमाउनुहोस
1.1 वैकल्पिक विधिहरू:
2 कसरी कर्ल परिभाषित गर्नुहोस्
2.1 चरण 4, कर्ल ठाँउ बन्द गर्नुहोस्: प्राकृतिक कपाल घुमाउनुहोस्:
2.2 चरण5आफ्नो कपाल खिच्नुहोस्:
प्राकृतिक कपाल घुमाउनुहोस
फोटो क्रेडिट: @naturallydidi
हामी सबै हाम्रो प्राकृतिक बाल बनावटको साथमा पूर्णतया प्रेममा हुनुपर्दछ। तथापि, यो चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त निराशाजनक हुन सक्छ जब तपाईं आफ्नो प्राकृतिक कर्ल पप गर्न चाहानुहुन्छ, र तपाइँ सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक कर्लसँग कपासको नजर हो। मैले 4a 4b कपाल टाइप गरेको छु, र मलाई माया गर्छु कि मेरो घुर्ती पप जब तिनीहरू धोएपछि र गहिरो अवस्थामा गीला हुन्छन्, तर एक पटक मेरो कपाल झन्झल्किन्छ, यसले धेरै परिवर्तन गर्छ। मैले मेरो कपाल ठीकसँग हेरचाह गर्न र हेरचाह कसरी सिक्न सम्म सम्म प्राकृतिक कपाल बनावटहरू जो ईर्ष्या गर्न प्रयोग गरे। तपाईंको बदल्ने कुरा प्राकृतिक संरचनाहरू लामो किन्की घुमाउने कपालमा हाइड्रेशनको लागि उचित छ र त्यसपछि ती फारलहरू एक चोटि उनीहरूको रूपमा ताल्चा लगाउँछन्। यो पोस्ट मुख्यतः मेरो बहिनीहरूका लागि जो4कपाल जस्ता 4A 4b र 4c टाइप गर्दछ र उनीहरूको कपाल घुमेको हेर्न र अधिक परिभाषित गर्न चाहन्छन्।
चरण 1: तपाईंको बनावट जान्नुहोस् र तपाईंको कपाल कस्तो लाग्न सक्छ जस्तो यथार्थवादी आशाहरू छन्। यदि तपाईसँग प्राकृतिक 4c कपाल छ भने, तपाईं आफ्नो बाल 3b बनावटमा बदल्न सक्नुहुन्न। त्यो एक अवास्तविक आशा हो। तपाईंको कपाल सबैभन्दा पहिले देख्न सक्छ यो कसरी देखिन्छ जब यो पुरा तरिकाले हाइड्रेटेड हुन्छ र पानी संग संतृप्त हुन्छ। सामान्यतया, हाम्रो कपालले 1-2 तहलाई कम गर्न सकिन्छ जब पर्याप्त हाइड्रेटेड हुन्छ। यो चाल उन कर्लहरु लाई कब्जा गर्न को लागी जब तपाईंको कपाल त्यो राज्य मा छ र उनलाई ठाँउ मा बंद गर्छ।
कदम 2: तपाईंको कपाल को पोलोपन स्तर थाहा छ: गर्न क्यान्सर कपाल घुम्न बालीमा घुम्न, तपाईंसँग आफ्नो कपाल सही तरिकाले हाइड्रेट कसरी बुझ्नै पर्छ। यो
फोटो क्रेडिट: @olive_chels
तपाईंलाई आफ्नो बाल पोलोपन स्तर जान्छ र कुन उत्पादनहरू तपाईंको लागि राम्रो काम गर्नेछ र कुन उत्पादनले तपाईंको कपाल बाहिर सुक्छ। यदि तपाईं कम porosity छ भने, यसको मतलब यो आफ्नो कपाल छुट्याउन गाह्रो छ; तथापि, जब तपाईं नमिराइजाइज गर्नुहुन्छ, यो लामो समय सम्म रहन्छ। उच्च porosity बाल छिट्टै saturates र नमी को आसान अवशोषण; तथापि, त्यो नमी बस सजिलो हराउँछ। Porosity आफ्नो बाल शाफ्ट मा pores को संख्या को संदर्भित गर्दछ। मेरो अर्को लेख छ कि गहिराईमा जान्छ porosity यहाँ.
यदि सबै असफल भएमा, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किन्की घुमाई बुने एक्सटेन्सन जस्तै कस्फेट कपाल बाक्लो,
3c क्लिप इन, र wigs जसले तपाइँलाई विस्तार गर्नुभएन भने तपाईलाई अझै पनि प्राकृतिक रूपमा देखाउनुहुन्छ। मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सन प्रस्ताव गर्दछ विशेष किन्की कर्ली उत्पादनहरू हरेक प्राकृतिक सस्ताको लागि! यसको सट्टा, तपाईं कपालको कपालको लागि कपाल कपाल, केसी घुमाउने कपाल, अफ्रो किन्की, अफ्रो घुमाउरो, 4A 4b वा 4c क्यान्सरियर कपालको लागि, हामीले तपाईंलाई छोड्नुभयो।
कसरी कर्ल परिभाषित गर्नुहोस्
चरण3नमी: पानी यसको किन्की राज्यको कपाल बाहिर निकाल्न उत्तम घटक हो। पानी एक सुपर हाइड्रोटर हो र तपाईंको कर्ल पप बनाउनेछ। पानीको बारेमा यो कुरा यति छिटो सुकेको छ, र हाम्रो कर्ल फिर्ता लिइन्छ! जब बाल पानी संग संतृप्त छ, र यो यसको किन्की राज्य भन्दा बाहिर छ, यो तपाईंको हावा को लागि सबै भन्दा राम्रो काम कर्ल क्यान्सर र तेल जोडने को लागि सबै भन्दा राम्रो समय हो। ग्लिसरिन पानीमा आधारित तेल हो जसले बाल शाफ्ट प्रवेश गर्छ। यसले पानीको रूपमा छिटो नबुझेको छैन र कपालमा सुन्दर छाला छोड्छ। म अत्यधिक क्यान्सर छोड्न पछि यो उत्पादन लागू गर्न सिफारिस गर्छु। त्यसपछि आफ्नो कर्ल क्यान्सर र छनौटको अन्य moisturizers प्रयोग गर्नुहोस्।
चरण 4, कर्ल ठाँउ बन्द गर्नुहोस्: प्राकृतिक कपाल घुमाउनुहोस्:
यस समयमा, तपाईंको कपाल अझै अपेक्षाकृत गीला र थोडा लम्बाई हुनुपर्छ। अब यो समय ती कर्लहरू स्थानमा बन्द गर्न। तपाईंको कुकुरको कपाल घुम्न खोज्ने चाल हट्ने र निर्जलीकरण रोक्न हो। अब कि तपाईंको कपाल यो घुमाउरो अवस्थामा छ, तपाईं छनौटको जेल लागू गर्न चाहानुहुन्छ। एक मनपर्ने जेल पर्यावरण स्टाइलर हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो कपालमा राख्नु भएका उत्पादनहरु पहिले जेल संग राम्रोसँग मिल्नेछ र दूध वा सेतो अवशिष्ट छोड्नु हुँदैन। जेल लिनुहोस् र तपाइँले बनाउनु भएको कर्ललाई बिचराएर बालोंमा यसलाई लागू गर्नुहोस्। अब बिस्तारै पुरानो टी शर्टको साथमा अतिरिक्त पानी बन्द। उत्तम परिणामहरूको लागि, एक hooded ड्रायर अन्तर्गत बस्नुहोस् ताकि जेल छिटो सुखार्न सक्छ र सम्भवतः धेरै सिक्न रोक्न सक्छ!
चरण5आफ्नो कपाल खिच्नुहोस्:
अब कि तपाईंको कपाल सुकाइन्छ, यो चिसो र घुमाउरो हेर्नु पर्छ। एक सानो अतिरिक्त लम्बाइ र भोल्युमको लागि, म जेलको कठोरता तोड्न र जडहरूमा कपाल घुमाउन सिफारिस गर्दछु र तपाईले बनाएको कर्ल बिना तपाईलाई हावा शरीरको शरीरलाई अनुमति दिन्छ। जब तपाईं आफ्नो किन्की कपाललाई यो नमी को प्रयोग गरेर घुमाउरो कपाल घुमाउनुहोस् र विधि लक गर्नुहोस्, तपाईंको कपाल जेलबाट थोडा दृढ हुनेछ। तथापि, यो दिन2को आसपास खुल जाएगा। तपाईं एक जैविक उत्पाद को लागि एक फ्लेक्सस्ड जेल पनि गर्न सक्छन्।
फोटो क्रेडिट: @beatbynesh
" यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ वा तपाईं जेलमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई सधैँ बहिष्कार, ब्रेड्स बहिष्कार, वा अन्य शैलीहरू जुन तपाइँको प्राकृतिक कपाल बनावट हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ।
मिनी ट्विस्टका प्रो र कन्
न्याय रद्द गर्नुहोस्: Cyntoia Brown